Marwo Safiya Cabdi oo ka hortimid talaabadii xarunta Baarlamaanka Kenya looga saaray cunug yar oo ay dhashay haweeney ka tirsan Baarlamaanka – Banaadir weyne
Marwo Safiya Cabdi oo ka hortimid talaabadii xarunta Baarlamaanka Kenya looga saaray cunug yar oo ay dhashay haweeney ka tirsan Baarlamaanka
Muran xoogan ayaa hareeyay kala fadhigii golaha baarlamaanka Kenya kadib markii haweeney ka mid xildhibaanada ay cunug yar oo shan bilood jir ah la timid intii uu socday Kulanka.
Ms Suleeqa Xasan oo baarlamaanka u matasha haweenka ku nool ismaamulka Kwale ee gobolka xeebta Kenya ayaa lagu qasbay in ay ka baxdo shirka kadib amar ka soo baxay Christopher Omulele, oo shir gudoominayay kala fadhiga Baarlamaanka.
Arintaan ayaa waxaa ka carooday haweenka kale iyo xildhibaano rag ahaa oo ku sugnaa shirka waxaana ay ugu baaqeen in mar Suleeqa aysan xarunta kala bixin Cunugeeda.
Xildhibaanka laga soo doortay degmada Ijara ee dowlada goboleedka Garissa ayaa sheegtay in ay ku faraxday in haweeneydaan ay cunugeeda usoo qaadato kala fadhiga Baarlamaanka.
Dhanka kale waxay ku hanjabtay hadii aan la sameyn xarun u gaar ah oo lagu naas nuujiyo caruurta ay ilmahooda dhan la imaan doonaan kala fadhiga Baarlamaanka.
Safiya oo hadalkeeda sii wadata ayaa intaa ku dartay in sanadkii 2013-kii arintaan ay meel mariyeen gudiga adeega baarlamaanka, waxaana ay falkii maanta ku tilmaantay cadeyn u ah dhibaatooyinka ay la kulmayaan dumarka Kenya.
Dhanka kale wakiilkaa dumarka ee ismaamulka Kwale Suleeqa Xasan ayaa sheegtay in maanta uu muhiim u ahaa kala fadhigii baarlamaanka sidaasi darteedna ay qasab ku noqotay in cunugeeda ay u soo wadato Xarunta Baarlamaanka Kenya. – Universal TV Somali